MUXUU JIRKAAGU U KULUL YAHAY MAR WALBA? - Awdinle Online
MUXUU JIRKAAGU U KULUL YAHAY MAR WALBA?
Heerkulka jidhka ee caadiga ah, oo loo yaqaano ‘normothermia’ ama ‘euthermia’, waa heerkulka caadiga ah ee laga helo bini-aadanka. Heerkulkaan caadiga ah waxaa lagu sheegey cabirkiisa in uu yahay inta udhaxaysa ( 36.5-37.5 ° C)- (97.7-99.5 ° F)
Hadii uu intaas ka bato ayaa la oran karaa heerkulka qofka waa uu siyaadey.
Hadaba waxyaalaha ugu badan ee in aad kuleyl ka dareento jirka sababi kara waxaa kamid ah 11 qodob ee aan kuusoo koobey waxayna kala yihiin.
1= Walaac stress ama wel-wel hadii aad qabto.
Dareemidda kulaylka iyo dhididka aan caadi ahayn waxay noqon kartaa calaamad muujineysa inaaq tahay qof uu hayo walaac ama stress kaas inta badan sababa in heer kulka gudaha jirka uu kordho.
2= Dhibaato ka jirta qanjirta qanjirka “Thyroid”
Qanjirkaaga waa qanjir ku yaala qoorta kaas oo soo saaro hoormoonka tayroodh, kaasoo kaalin muhiim ah ka ciyaaraya dheef-shiid kiimikaadkaaga.
“Hyperthyroidism” waa marka uu kordho soo saarista Hoormoonada Thyroid, waana cilad ku timaada qanjirka oo ah xanuun,
Tani waxay keeni kartaa isbeddel muuqaal ah oo kala duwan. Oo ay ugu horeyso kul badan ama hur badan in aad dareento oo lugaha iyo dhamaan jirka.
3= Daawooyinka aad qaadato ayaa keeni kara kulka jirka.
Daawooyinka qayb kamid ah ayaa sababa kuleel iyo dhidid joogta ah waxaana daawooyinkaas kamid ah
-antidepressants, including desipramine (Norpramin) and nortriptyline (Pamelor).
-heart and blood pressure drugs.
Way yaryihiin dadka ay kulka ku keenaan daawooyinkan.
4= Cuntooyinka iyo cabitaanada qayb kamid ah ayaa sababi kara kulka jirka.
In aad qaadato cuntooyin iyo cabitaano kulul ayaa iyaguna sabab u noqon jara kulka aad dareemayso, cuntooyinkaasna waxaa kamid ah cuntooyinka fast food ahaanta loo shiilo oo saliida lagu shiilo, Kafayga iyo qamriga.
5= “Anhidrosis” xanuunkan ayaa isna sababi kara hadii aad qabto in aad dareento kul badan,
Anhidrosis waa xaalad aanad dhididi karin inta jidhkaagu u baahan yahay, taas oo horseedi karta kulayl badan.
6= hadii aad qabto Sonkoroow/macaan ayaa sabab u noqon kara in aad kul dareento.
Sonkoroowgu wuxuu kaloo kaa dhigi karaa inaad kuley badan dareento
Dadka qaba nooca 1aad iyo nooca 2aad ee sonkorowga waxay aad u nugul yihiin kuleylka. Tani waxay si gaar ah ugu badantahay dadka aanan xakamaynin Sonkorowga ay qabaan kuwaas oo ay ka dhalato dhibaatooyin gaara neerfaha iyo dhaawaca ku yimaada xididdada dhiigga.
7= 65 sano hadii aad ku dhawdahay ama aad dhaaftay ayaa iyudana ah sabab kale oo kugu keeni kara in aad kul dareento.
8= haweenku ay Caadadu ka guurto oo dhaafa 45 sano ama ku dhaw ayaa dareema kul badan oo qaarka sare ee jirka u badan waxaana sabab taas u ah isbadalka hoormoonada ah ku yimid haweenayda,
9= Xiliga Caadada ay gabadhu u joogto ayaa iyaduna ay dareemi kartaa kul badan waxaana u sabab ah isbadalada hoormoonada ee dhacaya waqtigaas.
10= Hooyada uurka leh ayaa iyudana si lamid ah dareenta kulkaas maadaama ay iyudana uu is badal ku imaanayo xiliga uurka hoormoonadeeda.
11= Dhaawac gaara neerfayaasha ah mid kamid ah kuwa ugu badan ee kulka jirka sababa.
Haddii aad u maleyso inaad la kulantay mid ka mid ah xanuunadan ama xaaladahaa aan soo taxay ee kor ku xusan, fadlan ballan ka sameeyso Dhakhtarkaada si uu kuu caawiyo.
Hadii aad isku aragto calaamado kale oo dheeraad ku ah sida
-dhidid badan iyo kul joogta ah habeenkii.
– miisaankaada oo hoos u dhacaya
-garaaca wadnaha oo badan ama yaraada
– xanuun xabadka ah
– ama calaamado ka dheeraad ah intaas fadlan horey katag goob caafimaad si laguu caayaraada.
Ciwaanka mowduucaan inoo xiga haduu alle inoo qadaro waxaan ka dhigi doonaa sida kulka ama kuleylka la iskaga yareeyo adiga oo gurigaada jooga.
Fadalan Gaarsii asxaabtaada una SHARE garee ama halkaan uga wac qof kuu muhiim ah si uu u faaiideysto.
Previous articleAl-Shabaab takes over control of a Kenyan military base near Somali border
Next articleShould Eritrea introduce Scandinavian style national service?
Calaamadaha lagu garan karo Uurka
MA ISKU ARAGTAY DHABAR XANUUNKA JOOGTADA AH
Faa’iidada Laga Helo Shaaha Liinta Leh
FAA’IIDADA LAGA HELO LIIN-DHANAANTA
Waa Maxay Xanuunka Kaduudiye?
(7) QOF OO AY AAD U JECESHAHAY IN AY QANIINTU KANEECADA
Kaniinka Gaaska Ee Santaag Oo Laga Heley Maadada Khatarta ah Oo Sababta Kansarka
Halista Lagu Dhaxli Karo Yaanyo Shishiida
Maa aaminsan Tahay In MARAQ-DIGAAGA Halis leeyahay